Isamsung Odyssey G7: Ukujonga esweni ngokupheleleyo kwezemidlalo | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | 21/04/2021 18:00 | ngokubanzi, Reviews
Ukuphela konyaka ophelileyo inkampani yaseMzantsi Korea yazisa uthotho lweemveliso zemidlalo ngakumbi uluhlu Odyssey, izikrini ngenxa yesi sizathu sokuba inkampani ichaze abasebenzisi ukuba bafumane okuninzi kwimidlalo yabo yevidiyo.
Ngeli xesha sinetafile yovavanyo entsha Isamsung Oddysey G7, esweni esiphakamileyo esinegophe elungiselelwe ngokukodwa umdlalo. Fumanisa kuthi uhlalutyo olunzulu kwaye wazi ukuba kufanelekile ukuthenga kwakho. Sikuxelela into esiyicingayo kunye nesiphumo sokugqibela sohlalutyo lwethu.
1 Uyilo kunye nezixhobo: Ukujolisa "kwimidlalo"
3 Uqwalaselo nonxibelelwano
4 Sebenzisa amava noqingqo-maxabiso
Uyilo kunye nezixhobo: Ukujolisa "kwimidlalo"
Ngokunyaniseka, umkhwa wokongeza ii-RGBs ze-RGB kuyo yonke into ejolise ekubeni "kukudlala" yinto engandifanelanga ngokukodwa, ndikhetha uyilo olusengqiqweni. Nangona kunjalo, i-Samsung ikwazile ukuxhasa le mbono ngaphandle kokubaninzi kakhulu kwaye oko kusothuse ngokuzimeleyo. Siqala ngokuthathela ingqalelo enye yezona zinto zahlulwayo, ijika le-1000-millimeter lelona binzana liphezulu ngokubhekisele kubabekeli esongwayo. Oku ukongeza kunciphiso lwecala kunye ne-bezels ephezulu kunye noyilo olunoburhalarhume emazantsi, longezwe zizikrini ze-RGB ze-LED kwisiphelo ngasinye.
U bunzima iyonke: 6,5 Kg
Ubukhulu ubukhulu besiseko: 710.1 x 594.5 x 305.9 mm
Kwindonga engasemva sinenkxaso eyakhelwe-kakuhle ene-passer yekhebula, ngokunjalo Iringi ye-RGB ye-LED elinye ixesha, ine-trim eya kuthi iphazamise ukukhanya. Oku kuya kuba mfiliba kuzo zonke iimeko kwaye kuqapheleke ngakumbi xa sithetha ngokusisebenzisa ngokupheleleyo ebumnyameni, iya kuba yimeko apho iya kubonakala eludongeni. Isiseko sinokuhlengahlengiswa kubude ukuya kwiisentimitha eziyi-120 kwaye sinakho: ukuthambeka phakathi kwe-9º kunye + 13º, ujikeleze-15º kunye + 15º kunye nepivot phakathi kwe -2º kunye + 92º. Ukubeka iliso kwakhiwe ikakhulu ngeplastikhi emnyama kunye nokugqitywa kwesinyithi ukomelela.
Siqala, ngokucacileyo, ngepaneli yokubeka esweni eyona nto ibaluleke kakhulu phakathi kwezinto ezininzi. Sinohlobo lwe Iphaneli ye-VA engama-31,5 intshi nge Umba we-16: 9 eqhelekileyo kakhulu. Iphaneli ye-VA kunye noyilo olugobileyo kakhulu luyenza ukuba ikonwabele kuphela kubukhazikhazi bayo xa sizibeka kakuhle phambi kwayo, kufuneka silibale malunga nokuyisebenzisa ukusuka ebhedini okanye kwiindawo ezingabalulekanga ngqo embindini. Kolu hlolo, i-Samsung ikhethe i-QLED, itekhnoloji ephumelele impumelelo eninzi.
Isisombululo somthonyama sokubeka esweni iipekseli ezingama-2560 x 1440, Ayonto imbi kwaphela ukuba nakho ukonwabela imidlalo yePC elandelayo, kunye nokuhambelana ngokupheleleyo nezixhobo ezinjengePlayStation 5. Okwangoku ukukhanya okuphakathi kwe-350 cd / m2 nge-600 cd / m2 ubuninzi kwiindawo ezithile. Umahluko womyinge ukuya kuthi ga kwi-2.500: 1 ukuba asifuni kakhulu, ewe, ungqamaniso lwepaneli luya kulungelelaniswa Ukuhambelana kwe-NVIDIA G-Sync kunye ne-AMD FreeSync.
Uluhlu olunamandla olunikezelayo, kwimeko yakho i-HDR600 Kufuneka kuthiwe asifumananga ukuba sihlasela kakhulu. Ixabiso lokuhlaziya, ewe, lelona liphezulu kwimarike ngaphandle kokugqithisa, ifikelela kwi-240 Hz. Kwelinye icala, kwi-240 Hz singayisebenzisa kuphela ngobunzulu bombala weebhloko ezi-8, Kuya kufuneka siye ezantsi kwi-144 Hz ethobekileyo ukonwabela ipaneli ye-10-bit. Kwelinye icala.
Oku kubekwa kweliso kunendlela ye- inkqubo edityanisiweyo yesoftware ukuba iqhutywe yi-joystick ezantsi. Kuyo siya kufumana useto zombini kwinqanaba loqhagamshelo kunye noqwalaselo, nangona zingakhange zibonakale zinomdla kakhulu kum. Singayiphatha imiba yokuhlaziya phakathi kwabanye. Kuyo siza kubona ngexesha lokwenyani i "impu-tlag" ethi nakweyiphi na imeko ihlale ihleli in 1ms ubuncinci kwiimvavanyo zethu.
Ukuqhubela phambili kunxibelelwano, Siza kufumana amazibuko obungakanani obuqhelekileyo be-USB 3.0, izibuko lesiko le-USB Hub ukuba sifuna ukongeza uhlobo olunomdla wokongeza, kunye namazibuko amabini e-DisplayPort 1.4 kunye ne-HDMI 2.0 port. Awuyi kuphoswa nayiphina into, ngaphandle kokuba ufuna isandi, uya kuba nefowuni eyintloko kodwa ulibale ngezithethi. Ngolwazi oluthe kratya, Ngokubandakanya kuphela izibuko le-HDMI esinokufumana isnag xa usongeza ibha yesandi ukuphucula amava ethu xa ewonke.
Sebenzisa amava noqingqo-maxabiso
Ngento eguqukayo sihlala sinencasa emnandi. Kule meko ukugoba kwayo okuphezulu kukuthanda okanye ukuthiya. Ijika le-1000R kwisuphavayiza enjalo yenza ingqiqo enkulu, nangona kungekho mntu ubelivavanye ukuza kuthi ga ngoku. Esi sikrini sisigubungele ngokupheleleyo kwaye sithatha uninzi lwecandelo lethu lokubonwayo, oku kunethuba elicacileyo lokudlala. Impembelelo yokuqala emva koqhakamshelwano lokuqala kunye nokubeka iliso yenye yezinto ezimangazayo, akunakwenzeka ukuba ungothuki.
Uyayiqhela ngokukhawuleza, ngakumbi xa uza kuyisebenzisa ukudlala. Xa uceba ukusebenza naye, izinto ziyatshintsha, kwaye kunjalo Ngesi sizathu, yongezwe kugoso lwayo oluluqilima, olungelulo kakhulu, oluyilelwe injongo yalo, «umdlalo». Ukuntywiliselwa kugqityiwe, kodwa kuyilelwe kuphela kwaye kwenziwa kuphela kuluntu oludlala umdlalo. Nangona kunjalo, ukubekwa esweni kobu bukhulu kwidesktop kubonakala kunzima, ke kuya kufuneka ucace malunga nexabiso oza kulihlawula xa uthatha isigqibo sokulusebenzisa kwezinye iinjongo, kuba ukubukela iimovie kwindawo yomdlalo akunakuba kokona kulungileyo.
Ngelixa siqhuba uhlalutyo, siqinisekisile ukuba i-Samsung ikhuphe uhlaziyo lwe-firmware lokubeka esweni, oku kufakwe ngokulula nangaliphi na izibuko le-USB kwaye kunika umqondiso olungileyo wenkxaso enayo ngasemva. Nangona kunjalo, ixabiso liyimpambano yokwenene, ifumaneka kuphela kwabo bafuna ukwenza konke okusemandleni abo malunga noku,Isamsung G7 (C32G73TQSU) ...
Olu ibe luhlalutyo lwethu olunzulu lwe-Samsung's Odyssey G7, esweni esinegophe kakhulu kwaye sigqibelele ngokugqwesileyo kubadlali abaninzi, khumbula ukuba ungasishiya nayiphi na imibuzo kwibhokisi yezimvo.
Ithunyelwe nge: 21 April 2021
Utshintsho lokugqibela: 18 April 2021
Ijika elibukhali kakhulu
Ukuhambelana okuphezulu kunye nenqanaba elifanelekileyo lokuhlaziya
Inkxaso yobugcisa kunye noyilo olulungileyo
Maninzi amanye amazibuko alahlekileyo
Ixabiso elifikelelekayo ezimbalwa
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Isamsung Odyssey G7: esweni kakhulu yokudlala
Amantombazana asemthethweni kuSuku lwe-ICT: Sincokola noFran del Pozo, osuka kwiKhowudi.ORG